रोकिएन राहतका नाममा ‘बाइबल’को प्रचार, कारवाही गर्ने सरकारको चेतावनी – YesKathmandu.com
रोकिएन राहतका नाममा ‘बाइबल’को प्रचार, कारवाही गर्ने सरकारको चेतावनी
सोमबार २८, बैशाख २०७२
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले तवाही मच्चाएपछि घरवासविहीन भएका लाखौ पीडितलाई राहतका नाममा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरिएका तथ्यहरु एकपछि अर्काे गर्दै वाहिर आउन थालेका छन् ।
राजधानीको पाटन अस्पतालदेखि सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटसम्म भूकम्प पीडितलाई राहतका साथै धर्मको प्रचार गरिएको तथ्य फेला परेको छ । भूकम्पबाट घाइते भएर पाटन अस्पतालमा उपचार गराईरहेका ब्यक्तिलाई पहिले वाइवल बाँडिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुको अभियान सिन्धुपाल्चोको स्याउले–५ बत्लाङ पुगेको थियो । भूकम्पबाट घरबास गुमाएर खुल्ला आकाशमा आएका पीडितहरुलाई राहत सामग्रीका साथै बाइबल वितरण गरिएको थियो ।
त्यसपछि उनीहरुको अभियान बढि प्रभावित जिल्ला नुवाकोटमा भएको छ । नुवाकोटको पहाडी क्षेत्रमा उनीहरुले बाइबलसँगै राहत वाँडेको साँघु साप्ताहिकले उल्लेख गरेको छ । भूकम्पबाट पीडित बनेका ब्यक्ति भन्दा पनि बाइबल पढन मान्ने र क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने समुदायलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
भूकम्पबाट बढि प्रभावित भएका जिल्ला र आर्थिक सामाजिकरुपमा पछाडी परेका ठाउँका पीडितहरुलाई उनीहरुले धर्म प्रचारको केन्द्रविन्दु बनाएका छन् । ती ठाउँमा राहतसँगै बाइवल वितरण गर्ने र प्रभू येशूले सवै दुख हरण गरिदिने भ्रम समेत दिने गरेको साँघुले उल्लेख गरेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई राहतका साथै धर्मको प्रचार गर्न केही पत्रकारहरु समेत लागेका छन् । विदेशबाट संचालित अनलाईनहरुमा कार्यरत पत्रकारहरु क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा लागेको तथ्य पनि खुलेको छ । पीडितहरुलाई राहतका नाममा धर्मको प्रचार गरिएपनि सरकार भने मौन बसेको छ । राहतका नाममा धर्मको प्रचार गर्ने ब्यक्ति र संस्थालाई कारवाही गर्ने चेतावनी गृहमन्त्री बामदेव गौतमले दिएपनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छैन ।
ससुराली हिँडेका युवकको शव बोरामा भेटियो
हाक्का हाक्की टिमद्धारा भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण
Dipak Raj Bista says:
मैले अहिले सम्म हाम्रो देशमा हिन्दु, मुसलमान, बुद्ध लगायतका अन्य धर्मावलम्वीहरुले अरु धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरुलाई धर्म परिवर्तन गराएको थाहा पाएको छैन । किन क्रिष्चियनहरुले मात्र अरु धर्ममा आस्था राख्नेहरुलाई धर्म परिवर्तन गराउने प्रयास गर्दछन ? के स्वार्थ छ उनीहरुको । यो कुरा हामीहरुले समयमानै बुझ्नु पर्दछ नत्र पछि झन भयावह स्थिति आउन सक्दछ ।
पर्यटन बोर्डको सिईयो तत्काल नियुक्त गर्छुः पर्यटनमन्त्री
बिहीबारदेखि सूचना प्रविधि तथा मोबाइल मेला
मधेस आन्दोलनको छानविन आयोग विवादमा फस्यो, प्रधानन्यायाधीशले सोधिन कुन हैसियतमा सपथ ?
केही प्रहरीले नै संगठनको बदनाम गरेको आइजीपी अर्यालको आरोप
छोरा गुमेको चिन्ता भन्दा पनि दश लाख क्षतिपूर्ती पाउने खबरले उनी दंग थिए
बन्द गर्दै हिड्ने विप्लवका दुई सय बढी कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा
२७ बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत जाने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकी बुहारी आरक्षण कोटाबाट सांसद !
खत्रीलाई छाडिदिन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को आग्रह
नवराज सिलवाललाई आजै थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेश
हिमानीको नाम बेच्दै १४ लाख ठग्ने जाकिए प्रहरीको खोरमा
प्रचण्ड छोडेर गोपाल किराती बैद्यको क्याम्पमा : जनयुद्ध बारे केपी ओलीको प्रवचन सुन्न गइन
तीन सय कार्यकर्ताको साथमा राप्रपा पसे दीपक मनाङ्गे
शक्ति बस्नेत मन्त्री वन, सुरक्षा गृहमन्त्री !
विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला सङ्कटमा
विशेष एजेन्डा होइन,दुई देशबीच भातृत्व विकासका लागि आएको हुँ- स्वराज